Fanavaozana mikasika ilay Rivodoza Stan avy amin’i Oscar Mota · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Novambra 2018 2:44 GMT
Vao nifandray mivantana tamin'i Oscar Mota mihitsy aho izao, izay nandrakotra ny faharavàna nateraky ny rivodoza Stan tao Goatemala, tao amin'ny DesdeGuate.com avy tao an-tranony tao Guatemala City. Sombiny voadika tamin'ny resaka nifanaovanay avokoa izay manaraka eto:
OM: Izany mihitsy, tena nanjavona tao amin'ny sarintany ilay tanàna iray manontolo. Ary iray tamin'ireo toerana fizahantany tsara indrindra tao Goatemala izany. ”Ilay farihy mahatehotia indrindra manerana izao tontolo izao”, hoy zareo izay, Atitlán. Mbola misy faritra ao amin'ny firenena tsy nahafahan'ny mpamonjy voina nandehanana efa ho efatra na dimy andro izay, satria voasakana ny arabe. Ary tsy afaka mankeny amin'ny alàlan'ny fiaramanidina izy ireo noho ny toetrandro. Tsy misy rano sy sakafo ireo olana tafahitsoka any. Omaly, nikasa ny handefa angidimby miisa 30 hitondra sakafo ny minisitry ny fiarovana saingy noho ny toetrandro, iray ihany noa nalefan'izy ireo. Mba eritrereto fotsiny anie eh!
OM: Ity misy zavatra mifandray amin'izany. Misy gazety maimaimpoana antsoina hoe 20minutos any Espana. Jereo ity, androany, mandrakotra ny pejy voalohany miaraka amin'ny sarina lalao an-dahatsary! Noho izany, mikasika ilay fandrakofana dia nisy olona nandefa taratasy fitarainana ho an'ny lehiben'ilay gazety, izay nanana blaogy, ary namaly toy izao izy:
OM: Maka miadana ihany, raha ny amiko. Hamoaka zavatra aho izao dieny izao. Efa namoaka vaovao sy sary ny Guate360 ary novàna niaraka tamin'ny tsipika manokana hifamoivoizana etsy amboniny ny pejy voalohany.